बन्दूकको नालले हान्दै लतार्दै लतार्दै जङ्गलतिर लगे « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
बन्दूकको नालले हान्दै लतार्दै लतार्दै जङ्गलतिर लगे
१४ पुष २०७५, शनिबार ०८:५२ मा प्रकाशित
बाँच्न त उनी बाँचेकी छिन् तर, बाबुआमाको ममतामा खेल्ने र पढ्ने उमेरमै उनको सपना चकनाचुर भयो । आफ्ना पीडा सुनाउँदा उनी धेरै पटक बोल्नै नसकेर भक्कानिन् । निकै बेरको मौनतापछि सम्हालिँदै उनले आक्रोशपूर्ण स्वरमा भनिन् – “म अबोध बालिकाको के दोष थियो ? मैले के गल्ती गरेको थिएँ र मैले कलिलो उमेरमै अकल्पनीय यातना भोग्नुप¥यो ? कहाँ छ सरकार १ अहिलेसम्म उसले बलात्कार पीडितको पीडा महसुस गरेन ।” उनको बालक कालमै पाठेघर खसिसकेको छ । तर अहिलेसम्म घटनाका बारेमा कसैलाई भनेकी छैनन् । उनलाई घरपरिवार र समाजको डर छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको सययमा बलात्कारको पीडा भोग्ने उनी एक्ली होइनन् । यस्ता धेरै अबोध बालिकाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध सहनुप¥यो । द्वन्द्वकालका बलात्कृत महिलाको पीडा अकल्पनीय छन् । अर्की किशोरीको पीडा पनि त्यतिकै दर्दनाक छ । धारामा नुहाइरहेको अवस्थामा नेपाली सेनाको गस्ती आइपुग्यो । हात समातेर जबर्जस्ती उनलाई लगे छाउनीमा । “पेटिकोट लगाएर नुहाइरहेकी थिएँ, आर्मी आएर आँखामा पट्टी बाँधेर जबर्जस्ती हात तानेर लगे,” उनले भक्कानिदै भनिन् – “व्यारेकमा लगेर एउटा सानो कोठामा राखे । छ जना आर्मी थिए, पालैपालो बलात्कार गरे । एउटा पेटिकोटमा ३३ दिनसम्म मलाई त्यहीँ थुनेर राखे । हरेक दिन आएर बलात्कार गर्थे । म बोल्न, उठ्न सक्ने थिइनँ ।” उनलाई खाना त्यहीँ ल्याएर जबर्जस्ती खुवाउँथे ।
कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनेर उनीहरुले बन्दूकको नाल तेस्र्याउँथे । उनलाई त्यही कोठामा दिसापिसाब गर्ने भाँडो राखिदिएको थियो । तँ माओवादी होस् भनेर बन्दूकको नालले घोच्थे । तेत्तीस दिनपछि आफूलाई जङ्गलमा लगेर छाडिदिएका र त्यसपछि घर गएको उनले सुनाइन् । कसैलाई केही भनिनन् । आफन्तकामा गएर बसेको बहाना बनाए । आमाबुबा र अरु कसैलाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनेका घरिघरि सम्झन्थिन् ।
घटना भएको छ वर्षपछि उनको विवाह भयो । दुई छोरा जन्मिए । “कता कताबाट गाउँलेलाई घटनाबारे थाहा भएछ,” उनले भनिन् – “आर्मीले बलात्कार गरेकी भनेर घृणा गर्छन् । परिवार, समाजमा बस्न गा¥हो छ । मर्न पनि सकिँदैन ।” दुबै हातले आँशु पुछ्दै उनले भनिन् – “म निर्दोष मान्छे । गल्ती के थियो र मेरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन ?” उनलाई समाजमा आत्मसम्मानपूर्वक बस्न मन छ । सरकारसँग उनको यही माग छ ।
त्यो घटनापछि उनलाई धेरै मान्छे भएको ठाउँमा बस्न मन लाग्दैन । रुन मात्र मन लाग्छ । अरु हाँसीखुशी हिँडेको देख्दा पनि उनलाई आफ्नो जीवन देखेर धिक्कार्न मन लाग्छ । कुर्ताको सलले आँशु पुछ्दै उनले पीडा पोखिन् – “कति आँशु बग्यो, त्यो आँशु कस्ले देख्यो रु आँशुको मूल्य कति हो रु यतिका वर्षसम्म सरकार कहाँ छ रु”
सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित आयोगको कार्यकाल पनि आगामी माघ २६ मा सकिँदैछ । आयोगमा उजूरी दिएका बलात्कारपीडित महिलाको स्वास्थ्य उपचार तथा जीविकोपार्जनमा राज्यबाट यथासम्भव सहयोग हुनुपर्छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । –रासस